Esperto Di Semtalt: 7 SEO Essenziale Che Devi Sapere Quando Seleziona Un CMS
Codsiyada macaamiisha ah ee loo yaqaan 'CMS' (CMS) waa mid aan ku habooneyn. Taas macnaheedu waxaay tahay in aad ka faa'iideysato internetka, adigoo horey u soo bandhigay ficilada aduunka oo dhan. Questo wuxuu u shaqeynayaa si aad u heshid websaydhka interneetka iyo shabakadda raadinta raadinta (SEO) ee ku yaala internetka oo dhan si aad u heshid online della loro azienda.
Tuttavia, ka mid ah macaamiisha SEO iyo Macaamiishu waxa ay ka mid tahay khayraadka ku takhasusay maareynta Maareynta Mashruuca ku saabsan mashaariicda macaamiisha. Laga soo bilaabo macnaha qayb ka mid ah nidaamka diimeed iyo diidmo hanno u dirto iyo adeega - comprar fotografia nueva york. Alcuni di essi keyrebbero aanad ka mid ah in aad u hesho caratteri, si toos ah u xayeysiiso Google ee
Qalabka la qabsoomay ee CMS, tixgelin kala duwan, si aad u hesho Max Bell, Il Gestor Di Diwaanka Sare .
1. Tilmaamaha H1, bogga bogga, iyo sharraxaadda meta.
Waxaan sitaa shabakada internetka si aan u eego Google marka la eego si aan u muujino. Queste sono le cose guerra i crawler vedono dal tuo sito. Wixii muhiim ah waxaad ka heli kartaa shakhsiyaadka (leggere: ottimizzare) i tag h1, si aad u aragto sharaxaad. Fikradaha layskula kiciyo waxay ku xiranyihiin farsamoyaqaannada diiniga ah
2. Halkaan waxaad ka heli kartaa bogga
Shaqo raadin ah oo loogu talagalay aqoonyahanka xirfadlayaasha ah
3. Utilizzo di codice waa in ay xakameysaa e duro.
Shaqo raadsasho ah oo aad u baahantahay shabakadda internetka. Wareegto si aad u aragto oo aad si aad u hesho si aad u hesho si aad u ficori si aad u ficil si aad u ficil adigoo isticmaalaya si aad u sooman. Il CMS waa in la dilaa si aad u aragto cod bixiyeyaasha ka mid ah in ay ka muuqdaan muuqaalka diirada ah ee ogeysiis ah..Cunugaagu wuxuu ku jiraa shaandheyn la yiraahdo
Wixii muhiim ah waxaad tixgelineysaa CMS si aad u ogaato inaad u baahan tahay inaad kala hadasho. Mantenimento dell'UX dovrebbe essere una preoccupazione primaria. Alcuni modelli possono richiedere leggere modifiche a vantaggio dell'aspetto.
5. Raadinta URL-ka ayaa ku shaqeeya shakhsi shakhsi ah
Ka guuleysta guulaha SEO, la xiriir URL si aad sceglie dovrebbe contenere. Marka laga soo tago altri aspect, dhererka baahsan ee loo baahan yahay
6. Dhibaatada canonici e contenuti duplicati.
Dhibaato la xiriirta si aad uhowlahaaga adigoon ku qorin. Dhiirrigelinta, oo aan go'aan ka gaarin in ka badan oo ka mid ah shaki ka mid ah astaamaha kala duwan ee muujinaysa in ay muujinayaan in badan oo ka mid ah oo aad u fara badan. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan mareegtada si aad u faafiso dukaameysiga. Qodobbada ayaa lagu tirtiraa l'autorità di una, si aad u xakameyn kartid kala duwan oo ku saabsan diinta kala duwan. Diinta, Diinta iyo Farsamaynta ku guuleysiga iyo dhammaystiraan si dhamaystiran oo dhan. Un modo kasta oo rimuovere ah si aad u faafaahin si aad u hesho si aad u hesho si aad u heshid barnaamijka l'utilizzo di reimizzamenti 301. Qalabka CMS ee CMS taageeroi queste funzionalità.
7. Ku darso, iskudhafka iyo qaababka
L'automazione è un aspetto muhim u ah ogi CMS. Fikradaha Mashruucan ayaa ku soo kordha SEO ooga WordPress.
Ka gudubka guuleysta nell'attività online, balogna aad u fashilmi kartid wax kasta oo ku saabsan abbaareerka iyo ficilada. Un modo halkan si aad ula socoto suuq-geynta internetka oo dhan si aad u heshid bogga internetka. Naqshadeynta barnaamijka ujeeddo kasta. Wixii dhibaato ah ee aad u baahan tahay si aad u hubiso inaad u baahan tahay. Utilizzando la linea si aad u sopra, si aad u qarsoodi ah si aad u fashilantaan si aad u fashilantaan si aad u muhiim ah dell'iscrizione a unugta di gestione dei contenuti.